Dawladda Federalka Soomaaliya oo Puntland ugu baaqdey in xukuumad wax ku ool ah lasoo dhiso. | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News
Home Macluumaadka GMDQ & Xisbiyada Dawladda Federalka Soomaaliya oo Puntland ugu baaqdey in xukuumad wax ku ool...
Dawladda Federalka Soomaaliya oo Puntland ugu baaqdey in xukuumad wax ku ool ah lasoo dhiso.
Madaxweye ku-xixgeenka maamul gobolleedka Puntland C/xakiin Xaaji Camey oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in madaxda dowladda federaalka looga fadhiyo in ay soo dhisaan sida uu hadalka u dhigay dowlad wax ku ool ah.
Madaxweyne ku-xigeenka ayaa sheegay in mas’uuliyiinta ugu sareysa dowladda u muuqdaan kuwa iyaga isku mashquulsan, taasoo ayuu yiri haddii ay sii socto lumi karta hankii ay u hayeen bulshada Soomaaliyeed.
“Dowladda Federaalka, waa cusub tahay, laakiin waxay u egtahay in ay iyaga isku mashquulsan yihiin, intey mashquulka iyo waqtiga ay dacayayaan iska daayaan dowlad wax ku ool ah umada Soomaaliyeed haloo dhiso ayuu yiri madaxweye ku-xigeenka.
Hadalka madaxweyne ku-xigeenka ayaa imanaya xili hadal heynta ugu badan Soomaaliya tahay dhismaha xubnaha gollaha wasiirada oo la filayo in todobaadkan gudihiisa lagu dhawaaqo.
Ugu danbeyntii, madaxweyne kuxigeenka Puntland ayaa ugu baaqay madaxda dowladda in ay tixgeliyaan dadkii is bedel doonka ahaa, isla markaana dowlad dhab ah la dhiso.
Previous articleQaxootiga Soomaalida ee Yemen lagu duqeeyey oo dawladda Sucuudigu dalbatey in la baaro.
Next articleRag hubeysan isbaaro dad ku baaranaya oo ciidamada Amnigu dhaawaceen deg.Yaaqshiid ee G/Banaadir.